Iindaba - China International Beauty Expo
I-China International Beauty Expo (iGuangzhou), eyasekwa ngo-1989, ngaphambili yayisaziwa njengeCanton Beauty Expo. Imbali yorhwebo yobuhle edume kwihlabathi jikelele ibandakanya ubuhle obuchwepheshile, ukhathalelo lweenwele kunye nesimbo, izithambiso, ukhathalelo lomntu, kunye namakhonkco okubonelela asuka phezulu ukuya ezantsi. Lo ngunyaka wethu wama-30 njengomnye wabaququzeleli borhwebo lobuhle bakhulu nabaphambili kwihlabathi. Iqonga le-CIBE lisasebenza ngokuzimeleyo ngenkxaso ye-All-China Federation of Industry & Commercial Beauty Culture & Cosmetic Chamber. Phantse kumashumi amathathu eminyaka, injongo ye-CIBE ibikukondla imekobume esempilweni nenokhuphiswano kunye neqonga elizinzileyo lokurhweba lobuchwephesha kushishino lobuhle lwaseTshayina. I-CIBE ixhasa amashishini amancinci naphakathi, ilima igama lesizwe, inceda amashishini oonobuhle avelisa izinto ezintsha akhule kwaye anyukele kukhuphiswano lwamazwe ngamazwe, yazisa iimpawu zamazwe ngamazwe kwimarike yaseTshayina, kwaye ibenza bazuze uvakalelo lwenkcubeko kunye nokuqonda ngokubanzi imarike yaseTshayina.
Owona mboniso mkhulu kwaye ubanzi eTshayina
Umboniso wobuhle wamazwe ngamazwe waseTshayina uqokelela ezona mveliso ziphezulu zehlabathi, zigubungela lonke ikhonkco lemizi-mveliso (ubuhle bobuNgcali, izithambiso, izixhobo ezikrwada kunye nokupakishwa, imveliso yokhathalelo lobuhle, umatshini wokukhathalelwa kolusu, isixhobo sokuxilonga solusu, iCosmetology yezoNyango) kuphuhliso olujikelezayo. .
Lo ngumboniso wobuhle obuchwepheshile, i-MEICET ibakho rhoqo ngonyaka.
Yintoni eyahlukileyo kwiminyaka edlulileyo kukuba ngo-2020, iMeicet izisa iimveliso zamva nje--------ISEMECO Skin Image Analyzer.
I-ISEMECO Skin Image Analyzer yi-world debut ye-Portrait screen ye-Skin Diagnostic Device kwisibhedlele se-dermatology kunye ne-cosmetology Hospital.
Ixesha: Nge-4 kaSeptemba ukuya kwi-6 Septemba, 2020.
Ixesha lokuposa: Nov-04-2020